यसकारण जान्छ नेपालदेखि अफगानिस्तान सम्म शक्तिशालि भुकम्प : वैज्ञानिक तथ्य – Idea Khabar
आइडिया खबर२०७६ आश्विन ८, बुधबार ०७:१०
आज हिमालय धेरै देशको लागि जीवनदायी छ, तर वैज्ञानिकहरू भन्छन यदि यी दुई प्लेट बीचको घर्षण यसरिनै बढिरहने हो भने आउँदो समयमा यि हिमाल एसिया महादेशको विनाशको कारण बन्न सक्छ ।
एजेन्सि । प्रत्येक बर्ष संसारभर भैंचालो घटनाहरु भैरहन्छन्। यी कम्पनहरू, जसले तपाईंको खुट्टा मुनिबाट जमिन हल्लाऊछ, ठूला ठूला भवनहरू ढाल्ने गर्दछ। नेपालमा रहेको हिमालय श्रृंकालाले अफगानिस्तान सम्मको क्षेत्र ओगटेको छ, यहाँ भूकम्पको सबैभन्दा बढी घटनाहरू हुनेगरेकाछन् । के तपाईंलाई थाहा छ किन हिमालयको यी विशेष क्षेत्रहरूमा भूकम्प आउँछ?
वैज्ञानिक विश्लेषणका अनुसार नेपालको हिमालय वरपरको भागलाई भारतीय प्लेटको नामले चिन्ने गरिएको छ । अर्को तर्फ अफगानिस्तान पटिको भागलाई युरेसिया प्लेटको रूपमा चिनिन्छ। यी दुईसँग सम्बन्धित तेस्रो भाग अरब र अफ्रिकी प्लेट हो जुन धेरै देशहरूमा जोडिएको छ। हिमालयका वरपरका क्षेत्रहरूमा बारम्बार भूकम्प हुनुको कारण यो हो कि जब यी प्लेटहरूले एक अर्काको क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने प्रयास गर्छन्, तिनीहरू एक अर्काबाट रोकिन्छन्। यसले यी प्लेटहरूको घर्षणबाट ठूलो मात्रामा उर्जा छोड्दछ। यो तीब्र घर्षणले पृथ्वी हल्लाउन थाल्छ। यति मात्र होइन, यस वरपर पृथ्वीको चारैपट्टि धरहरु फुट्छन्, कहिलेकाँही धेरै हप्ता र कहिलेकाँही धेरै महिनाका लागि यो उर्जा बीच-बीचमा परिवर्तित हुन्छ यसैले भूकम्प आउँदछ ।
२०१२ मा प्रकाशित एक अनुसन्धान
अनुसन्धानका अनुसार हिमालयको मध्य भागमा ८ देखि ८.५ रेक्टर स्केल सम्मका धेरै भूकम्पहरू रेकर्ड भै सकेको छ ।
हाल सम्म यस क्षेत्रमा आएका भुकम्पले नेपाल देखि अफगानिस्तान सम्मको हिमालय रेन्जमा ठुलो दरार पैदा गरेको छ ।
बि सं. २०९० को भूकम्पले सतहमा १५० किलोमिटर लामो दरार सिर्जना गरेको थियो । जुन आज सम्म पूर्ण रूपमा भर्न सकेको छैन।
कसरि बने हिमालहरु
वैज्ञानिकहरूका अनुसार भारतीय प्लेट जुन पृथ्वीमा १५० किलोमिटर पछाडि पसेको छ प्रत्येक वर्ष ४५ मिलिमिटरको दरमा युरेसियन प्लेटतर्फ टाँसिन गैरहेको छ । तिनीहरूको स्लाइडको कारण, यी दुबै प्लेटहरू एकसाथ घर्षण हुँदैछन्। यस घर्षणको परिणाम हिमालयको निर्माण प्रकृया हो भन्ने बेज्ञनिकहरुको दावि रहेको छ । यी दुई प्लेट बीचको घर्षण बढ्दै जाँदा, पृथ्वी थोरै भासियो र कतै अल्को भयो अग्लो भुः भाग पहाड बन्न थाल्यो । आज हिमालय धेरै देशको लागि जीवनदायी छ, तर वैज्ञानिकहरू भन्छन कि यदि यी दुई प्लेट बीचको घर्षण यसरिनै बढिरहने हो भने आउँदो समयमा यि हिमल एसिया महादेशको विनाशको कारण बन्न सक्छ ।